भन्नु पर्दैन, गाथाका स्रोता र पाठक बाबारे सकेसम्म बढी खोजीनीति गर्छन्। को बा त ? बा भनेपछि बा। केपी बा भने पनि हुन्छ, ओली बा भने पनि हुन्छ। आखिर, उनी देशका ठूला हस्ती हुन्। संघीय....
२०७७ माघ ०९ गते १७:१४ मा प्रकाशित
कवि भूपी शेरचनले गफगाफ र कवितामा यसै भनेका थिएनन्– हल्लाको देश। कविको वाणी कति सत्य हुन्छ। भूपी काठमाडौंमा जन्मिएका थिएनन्। उनको जन्म भएको थियो मुस्ताङको कुनै गाउँमा। कम्तीमा, मैले उनको गाउँको नाम बिर्सिनु हुँदैन थियो।....
प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ आफ्ना विरोधीको क्यारिकेचर उतार्नमा लागेका छन्। कहिले माधव नेपालको, कहिले झलनाथ खनालको। प्रधानमन्त्री ओलीको एकजना समर्थक भन्दै थियो, ‘बाको अभिनय दाम्मी थियो। मलाई उनको अभिनय कता कता चार्ली च्याप्लिनको अभिनयजस्तै लाग्यो। काफी दम....
उसलाई त्यतिबेला लागेको थियो– यसरी नभागेसम्म क्रान्ति आउँदैन। क्रान्ति नआएसम्म केही पनि बदलिँदैन। अहिलेसम्म पनि परिवर्तनको त्यो भूत लागेकोलाग्यै छ। थाहा छैन, २००७ सालपछि कति मानिस परिवर्तनको खोजीमा लागे ? त्यो पुस्तापछि अझै कति पुस्ता बीपी,....